करीब आधा नेपाली परिवार ऋणमा
हालै सार्वजनिक एक सर्वेक्षण अनुसार देशको झण्डै आधा जनसंख्याले दैनिक व्यवहार चलाउनकै लागि ऋण लिएको छ । यसरी ऋणमा जीवन धानिरहेका ४७.३ प्रतिशतमध्ये अधिकांश परिवारको रु.१ लाखदेखि रु.३ लाखसम्म ऋण छ । मासिक करीब रु.१० हजारदेखि रु.४० हजारसम्म कमाउनेले यस्तो ऋण लिएका छन् र यीमध्ये ३६ प्रतिशत गाउँमा र ३१ प्रतिशतको नगरमा बसोबास छ ।
संघीयता लागू भएसँगै गाउँसम्म ब्यांकको पहुँच बढाउने सरकारी नीति अनुसार वाणिज्य ब्यांकहरूले स्थानीय तहमा शाखा विस्तार गर्न शुरू गरे पनि अझै आधा स्थानीय तह ब्यांकको पहुँचभन्दा बाहिरै छन् । सर्वेक्षणले पनि ब्यांकसम्मकोे पहुँच नगरवासीमै बढी देखाएको छ ।
ब्यांकबाट ऋण सुविधा लिने नगरवासी २५.७ प्रतिशत छन् भने गाउँका १४.७ प्रतिशत मात्रै छन् । बहुसंख्यक जनता अझै पनि अनौपचारिक माध्यम (साहू, साथीभाइ, आफन्त) बाटै वित्तीय कारोबार गरिरहेका छन् । उच्च ब्याजदर भए पनि साहू र साथीभाइबाट ऋण लिनु बाध्यता भएको उनीहरू बताउँछन् ।
अनौपचारिक माध्यमबाट ऋण लिने उत्तरदातामध्ये २५.४ प्रतिशतले साहूबाट र २६.२ प्रतिशतले साथीभाइ तथा आफन्तबाट ऋण लिने गरेको देखिएको छ । साहूबाट ऋण लिने सबैभन्दा धेरै प्रदेश–२ का (४८ प्रतिशत) बासिन्दा छन् ।
यसरी साहूको ऋणको भारी बोक्नेहरू अधिकांश विपन्न र औपचारिक शिक्षा नलिएकाहरू छन् । साहूसँग ऋण लिनेमध्ये ३५.७ प्रतिशत निरक्षर, ३०.७ प्रतिशत प्राथमिक तहको शिक्षा हासिल गरेका र मासिक रु.१० हजारभन्दा कम कमाउने ३१.८ प्रतिशत रहेको सर्वेक्षणबाट देखिएको छ ।
सहकारीबाट ऋण लिने कुल जनसंख्यामध्ये महिलाको संख्या ३२.६ प्रतिशत छ भने पुरुषको २२.१ प्रतिशत । गाउँमै सहकारी खुल्नु, ठूलो संख्यामा पुरुषहरू वैदेशिक रोजगारीमा जानु, शैक्षिकस्तर बढ्नु र विभिन्न संस्थाहरूमा बढ्दो महिला सहभागिताले वित्तीय क्षेत्रमा पनि महिलाको उपस्थिति बढ्न थालेको हो ।
पछिल्ला केही वर्षमा घरखर्च चलाउनेदेखि साना व्यवसायमा महिलाको उपस्थिति बलियो देखिएको छ । श्रीमान् वा आफन्तले विदेशबाट पठाएको रकम निकाल्न वा जम्मा गर्न सहकारी जाने महिलाहरूको संख्या उल्लेख्य छ ।
त्यस्तै २९.३ प्रतिशत उत्तरदाताले रोजगारी नपाउँदा आर्थिक अवस्थामा सुधार हुन नसकेको उल्लेख गरेका छन् । मुलुककै आर्थिक अवस्था दयनीय रहेका कारण आफ्नो र परिवारको अवस्थामा सुधार हुन नसकेको बताउनेहरू २१ प्रतिशत छन् । १० प्रतिशत उत्तरदाताले आफ्नो ज्यालामा चित्त बुझाएका छैनन् भने वैदेशिक रोजगारमा जान नपाउँदा गरीबीको पीडा खेप्नु परेको बताउने १७ प्रतिशत छन् ।
ऋणमा रहेका अधिकांश उत्तरदाताको आगामी पाँच वर्षभित्र आर्थिक अवस्थामा सुधार हुने अपेक्षा छ । उनीहरूको यस्तो अपेक्षाको कारण जारी सडक विस्तार, पूर्वाधारमा भइरहेको लगानी, वैदेशिक रोजगार, कृषिमा आधुनिकीकरण, सिंचाइको विस्तार लगायत हो ।
अबको पाँच वर्षमा तपाईंको आर्थिक अवस्था कस्तो होला ? भनेर सोधिएको प्रश्नमा ८४.१ प्रतिशत उत्तरदाता अवस्था सुधार हुनेमा ढुक्क देखिए । सुधार हुनेमा विश्वास नरहेकाहरू १०.८ प्रतिशत मात्रै छन् भने, थप बिग्रन्छ भन्ने नगन्य (१.७%) छन् ।
अरूभन्दा आम्दानी कम र ऋण धेरै रहेका कर्णाली प्रदेशका उत्तरदाताले आफ्नो आर्थिक अवस्थामा सुधार भइरहेको बताएका छन् । विगतका वर्षहरूभन्दा अहिले तपाईंको आर्थिक अवस्थामा कस्तो परिवर्तन आयो ? भन्ने प्रश्नमा कर्णाली प्रदेशका ३०.९ प्रतिशत उत्तरदाताले आर्थिक अवस्थामा सुधार भइरहेको बताएका हुन् ।
विकास साझेदार संस्था र दाताहरूले चलाएका विभिन्न परियोजनाका कारण उनीहरू बढी आशावादी भएको सर्वेक्षणले औंल्याएको छ । त्यस्तै सडक निर्माण र विद्यालय शिक्षाका विभिन्न कार्यक्रमले पनि कर्णाली प्रदेशमा सकारात्मक ऊर्जा ल्याएको छ ।
प्रदेश–५ का जनताको आर्थिक अवस्था पनि सुधारोन्मुख छ । यहाँका २६ प्रतिशत उत्तरदाताले अवस्था सुधारोन्मुख रहेको बताइरहँदा प्रदेश–२ का १०.२ प्रतिशतले मात्र आफ्नो आर्थिक हैसियत सुधारोन्मुख रहेको बताएका छन् ।
प्रदेश–२ का ७२.२ प्रतिशत उत्तरदाताले केही वर्षदेखि आफ्नो आर्थिक हैसियतमा कुनै परिवर्तन नआएकोे उल्लेख गरेका छन् । सर्वेक्षणका अनुसार प्रदेश–२ कै ५.६ प्रतिशतको आर्थिक अवस्था खस्कँदो छ भने देशभरको तथ्यांक हेर्दा यो संख्या १.८ प्रतिशत मात्रै छ ।
आफ्नो आर्थिक अवस्था सुधारोन्मुख रहेको बताउनेमध्ये गाउँमा बस्ने र नगरमा बस्ने बीचको फरक धेरै छैन । १९.४ प्रतिशत शहरी जनसंख्याले आर्थिक अवस्थामा सुधार भएको बताइरहँदा गाउँमा बस्ने १५.३ प्रतिशतले आफ्नो अवस्था सुधारोन्मुख रहेको बताएका छन् ।
रोचक त के भने स्नातक तह पूरा गरेका २५.९ प्रतिशत र निरक्षर तथा अनौपचारिक शिक्षा मात्रै लिएका २०.२ प्रतिशतले आफ्नो आर्थिक अवस्थामा सुधार भइरहेको बताएका छन् ।